Raharisoamalala Patricia : “Tompon’antoka amin’ny “Raharaha Claudine” koa ny fanjakana” | NewsMada
Raharisoamalala Patricia : “Tompon’antoka amin’ny “Raharaha Claudine” koa ny fanjakana”
Mby aiza ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”? Tsy tokony havela amin’izao. Tompon’antoka aminy koa ny fanjakana, raha ny fijerin’ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe.
“Na tiana na tsy tiana, idiran’ny fanjakana sy ny vahoaka io. Satria ny vola tokony hampiasaina amin’ny fampandrosoana ny tanàna no voahodina ho amin’ny tombontsoan’olon-tokana na olom-bitsy. Tsy ara-drariny izay, ka tena tokony hidiran’ny daholobe ary tompon’antoka koa ny fanjakana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe, Raharisoamalala Patricia, teny Antanimena, omaly, momba ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine” izay tsy tokony hampanginina na havela amin’izao. Antony nahavoarohirohy sy nitanana azy ny fanodinkodinam-bola, izay nampiasaina tamin’ny kaominina maro samihafa manerana an’i Madagasikara. An’ny vahoaka ny vola ampiasaina eny anivon’ny kaominina.
Manaraka akaiky ny raharaha ny vahoaka
Misafotofoto be amin’izao fotoana izao ny toe-draharaha eto amintsika. Mbola mitodika any amin’ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine” sy ny “Raharaha Andriamandavy VII Riana” ny sain’ny mpanara-baovao rehetra amin’izao.
Manaraka akaiky fatratra ny fandehan’ireo raharaha ireo ny rehetra, indrindra ny firaisamonina sivily. Tsy mamela izany ho fatifaty momoka na very an-javona amin’izao ny tsy fanarahan-dalàna toy ireny izy ireo.
Ny angatahin’ny vahoaka sy ny eo anivon’ny firaisamonina sivily: mila ampahafantarina mazava ho hitan’ny rehetra hoe aiza ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”? Tsy ho vitavita ho azy izany, sanatria, toy ny raharaha rehetra efa nisy teo aloha. Raha tena nanao fandikan-dalàna izy, hampiharina aminy ny lalàna. Mba tsy hisy intsony eto amintsika ny hoe tsimatimanota. “Tena mihatra tokoa ve fa tany tan-dalàna i Madagasikara?” hoy izy.
Mihaino sy mandini-tena ny amin’izay ve ny mpitondra? Ataony ihany ny ataony, vao mainka mampitombo ny ahiahy tsy ihavanana lava eo amin’ny vahoaka.